Ciidamada AMISOM oo la siiyey amaro dheeraad ah oo la xiriira hawlgaladooda. – SBC
Ciidamada AMISOM oo la siiyey amaro dheeraad ah oo la xiriira hawlgaladooda.
Posted by editor on July 13, 2011 Comments
Ciidamada Midowga Afrika ka socda ee ku hawlgalaya magaca AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa la farey amaro dheeraad ah oo la xiriira hawlgaladooda, kaasi oo ah inay ka qayb qaataan oo ay sugayaan amaanka hawlwadeenada hay’adaha samafalka ka socda ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Gudoomiyaha golaha midowga Afrika ayaa fatey ciidamada AMISOM ay siiyaan wax kasta oo awoodooda ah sidii ay u xaqiijin lahaayeen amaanka dadka ka shaqeynaya samafalka, si ay ugu helaan awood inay caawiyaan dadka u baahan cuntada & gargaarka kale.
Hawsha xiligan ee AMISOM ayaa ah in ay taageerto dawlada KMG Soomaaliya iyadoo ku gacan siinaysa dib u soo celinta amaanka & kala dambeynta, wadanka.
5,500 ciidamo ka socda Uganda & Burundi ayaa Soomaaliya lagu soo daadgureeyey ilaa iyo sanadkii 2007, kuwaasi oo hoostaga midowga Afrika.
Dhinaca kale madaxweynihii hore ee wadanka Ghana Jerry John Rawlings oo xiligan midowga Afrika u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa la sheegay in uu dhawaan socdaal ku tagi doono magaalada Muqdisho isagoo muujin doona culeyska loo baahan yahay in beesha caalamka la saaro ee ku aadan xaalada abaareed ee ka taagan Soomaaliya.